Indlu ye-Cottage epholileyo kwindawo yembali ye-Ardres - I-Airbnb
Indlu ye-Cottage epholileyo kwindawo yembali ye-Ardres
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguFlorence
KweNdlu kubekwe kwindawo ezolileyo Lane sasikufuphi ezimbalwa ukusuka iivenkile zokutyela, kufutshane kakhulu Lakes entliziyweni yimbali ye Ardres. Wena bazakuyivuyela indawo, umlinganiswa kwidolophu encinane Ardres, sinentuthuzelo amagumbi kunye lokuhlambela zabo zabucala 2 imigangatho. Isetingi sifanelekile kwizibini ezitshatileyo okanye ukuhlangana kwakhona nabahlobo ukutyelela i-Opal Coast, i-2 capes, iidolophu zaseSt Omer, eBoulogne ...
IOfisi yabakhenkethi engummelwane.
Amashiti kunye neetawuli zinikezelwe.
I-100m2 gîte ifumaneka ngokupheleleyo kubahambi ngexesha lokuhlala kwabo.
Kumgangatho ophantsi: igumbi lokuhlala, ikhitshi, i-pantry.
Umgangatho wokuqala: Igumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala (ibhafu kunye ne-WC), igumbi lokuhlala elincinci elixhotyiswe ngebhedi yesofa yezihlalo ezi-2 evula kwi-terrace yangaphandle.
Umgangatho we-2nd: igumbi lokulala elikhulu 1 ibhedi enkulu ephindwe kabini + 1 ibhedi eyodwa ene-mezzanine (imidlalo kunye nokufunda) kunye negumbi lokuhlambela labucala (ishawa kunye ne-wc).
Le ndlu ikwindlela ezolileyo entliziyweni yeziko lembali lase-Ardres, elinomtsalane omninzi. Indlu endala inalo lonke intuthuzelo efunekayo.
Ngaphambi kokuhlala kwakho, ungathandabuzi ukundibuza imibuzo yakho.
Ekufikeni kwakho ndiya kukunika ulwazi malunga neevenkile kunye neendawo zokutyela ezikufutshane nakwiindawo zabakhenkethi kunye nendalo engqongileyo. Ngexesha lokuhlala kwakho ndingakunceda nanini na.
Ekufikeni kwakho ndiya kukunika ulwazi malunga neevenkile kunye neendawo zokutyela ezikufutshane nakwiinda…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ardres